လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကွင်းလယ်လူ သီယာဂိုအယ်ကန်တာရာကို ခေါ်ယူဖို့ စကားပြောဆိုပြီးပြီ။ ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကနေ ထွက်ခွာဖို့ အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားပြီဖြစ်သလို၊ လီဗာပူးလ်အသင်းကို ပြောင်းချင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကလည်း သီယာဂိုကို သင့်တော်တဲ့ ဈေးတစ်ခုရတာနဲ့ လက်လွှတ်သွားမယ်လို့ ရူမင်နစ်ဂီကိုယ်တိုင် ဝန်ခံထားပြီးသား။ ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့်မို့ အခုထိ သီယာဂိုက လီဗာပူးလ်ကို မပြောင်းသေးတာလဲ? ဘယ်အကြောင်းတရားက ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကို ကြန့်ကြာစေတာလဲ ? နာမည်ကြီး ဂျာနယ်လစ် ရိုမာနို ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ သီယာဂိုနဲ့လည်း ဆွေးနွေးပြီးသွားပါပြီ။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့လည်း ဆွေးနွေးပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ဘက်က တောင်းဆိုတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ ယူရိုသန်း ၃၀ ကိုပေးချေဖို့ အခက်တွေ့နေပါတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့ကြန့်ကြာရခြင်း အဓိက အချက်ကတော့ ဒါပါပဲ။ စာချုပ်သက်တမ်း ၁ နှစ်သာ ကျန်တော့တဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်အတွက် လီဗာပူးလ်အသင်းက ယူရိုသန်း ၃၀...
Categories Bundesliga	Comments: 0
ဆက်တီယန်ကို ထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးနောက် နယ်သာလန် နည်းပြ ရော်နယ်လ်ကိုးလ်မင်းနဲ့ အစားထိုးသွားမည့် #ဘာစီလိုနာ
ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကို ပေါ်တူမြေ၌ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်း အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ခြေလှမ်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ ဘက်တစ်နည်းပြဟောင်း ဆက်တီယန်ကို ယမန်နေ့ညကပဲ ထုတ်ပယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဆက်တီယန်ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သည့် (၆) လ အတွင်း စုစုပေါင်း (၂၅) ပွဲကစားရာမှာတော့ (၁၆) ပွဲနိုင်၊ (၄) ပွဲသရေ ၊ (၅) ပွဲရှုံး ရလဒ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး Win Rate အားဖြင့် ၆၄% အထိရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ ဆက်တီယန်ကို အပြီးတိုင်ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ “ဘုတ်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ နည်းပြ ဆက်တီယန်ဟာ အသင်းရဲ့ နည်းပြအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ အသင်းရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ပထမဦးဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်ရှိ နည်းစနစ် လက်ထောက်ကိုယ်တိုင်...
မော်ရင်ဟိုရဲ့ တော့တင်ဟမ်စပါးစ်အသင်းဟာ ဘန်လေအသင်းနှင့် လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်သည့် အင်္ဂလန် လက်ရွှေးစင်ဂိုးသမားဟောင်း ဂျိုးဟတ်ကို အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးဖြင့် ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၃ နှစ် အရွယ် ဂျိုးဟတ်ဟာ မကြာခင်အချိန်အတွင်း ဆေးစစ်မှုခံယူပြီး ကာလတို စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဂျိုးဟတ်ဟာ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့က စပါးစ်အသင်းနှင့် လမ်းခွဲသွားခဲ့သော နယ်သာလန်ဂိုးသမား မစ်ချယ်ဗွန်း၏ နေရာကို ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုဟာ ဂျိုးဟတ်ကို ဒုတိယဂိုးသမား ပေါ်လို ဂတ်ဇာနီဂါ နှင့်အပြိုင်ဖြစ်စေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားသလို၊ အတွေ့အကြုံရင့် Home-Grown (ငယ်မွေးခြံပေါက်) ပလေယာကို လိုချင်သည့်အတွက်ကြောင့် ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စပါးစ်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့သည့်ရာသီအတွင်း Home-Grown ကစားသမား နှင့် နိုင်ငံခြားသား ကစားသမားများ အရေအတွက် အချိုးမညီသည့်အတွက်ကြောင့် ခေါင်းစားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ သို့အတွက်ကြောင့် မော်ရင်ဟိုဟာ ၂၀၂၀ အစောပိုင်းကာလမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲအတွက် လူစာရင်းတင်သွင်းမှုမှာ ကွင်းလယ်လူ...
ဆော်ဒီအကျိုးတူစီးပွာရေးအုပ်စု နှင့်အရောင်းအဝယ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့ နယူးကာဆယ်အသင်းကို ပြင်သစ်အခြေစိုက် စင်ကာပူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုမှ ဝယ်ယူဖို့ စတင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Bellagraph Nova Group (BNG) လို့ အမည်ခေါ်တွင်တဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့၌ ရုံးချုပ်တည်ထားပြီး လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုဟာ နယူးကာဆယ် တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ကလပ်အသင်း၏ အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးမှုကိုတော့ နယူးကာဆယ်ကစားသမားဟောင်း အလန်ရှီးယား နှင့် မိုက်ကယ်ချိုပရာတို့မှာ ကြားဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ BNG မှ ဖော်ပြထားပါတယ်။ “Bellagraph Nova Group၏ တည်ထောင်သူများဟာ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်ခုနှင့်အတူ ရံပုံငွေအထောက်အထားကို သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့၌ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ နယူးကာဆယ် ဘောလုံးကလပ် ၊ အသိုင်းအဝိုင်း နှင့် စေ့စပ်ညှိ့နှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် အင်္ဂလန်ကစားသမားအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း အလန်ရှီးယားနှင့် နယူးကာဆယ် ကစားသမားဟောင်း မိုက်ကယ်ချိုပရာတို့ရဲ့ အကူအညီကို ရယူခဲ့ရပါတယ်” လို့ BNGက...
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ဂျာမန်ကြယ်ပွင့် ကိုင်းဟာဗက်ဇ်အတွက် အမြင့်ဆုံး ပေါင်သန်း ၉၀ ဖြင့် ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သော်လည်း လေဗာကူဆင်အသင်းကတော့ အဆိုပါ ပြောင်းရွှေ့ကြေးကို လက်မခံပဲ ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ လမ်းပတ်ရဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ယခုနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ဟာဗက်ဇ်ကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် အသည်းအသန်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီး ကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဟာဗက်ဇ်ကိုယ်တိုင်လည်း ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာ လေဗာကူဆင်အသင်းမှ ထွက်ခွာဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ လေဗာကူဆင်အသင်းကတော့ ဟာဗက်ဇ်ကို လျော့ဈေးဖြင့် ရောင်းထုတ်ဖို့ မရှိသည့်အပြင် သတ်မှတ်ထားသည့် ဈေးအတိုင်း အပြည့်အဝပေးချေမှသာ ရောင်းမယ်ဆိုပြီး တင်းခံထားပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ကိုင်းဟာဗက်ဇ်အတွက် ပေါင်သန်း ၉၀ ထက်ပိုသုံးမှာမဟုတ်သလို၊ ၉၀ ထက်ပိုပြီး တောင်းဆိုလာလျှင်လည်း ခေါ်ယူမှာမဟုတ်တော့ကြောင်း လေဗာကူဆင်အသင်းကို တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ လောလောဆယ်မှာ ဇိုင်းယက်စ်နှင့် တီမိုဝါနာတို့အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျများစွာ သုံးစွဲပြီး ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက် နောက်ထပ်ကစားသမားသစ်ခေါ်ယူရေးမှာ အနည်းငယ်တုံ့ဆိုင်းနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကွင်းလယ်တိုက်စစ်တစ်နေရာအပြင် ဘယ်နောက်ခံလူ နှင့် ကွင်းလယ်ခံစစ်ပိုင်းအတွက်...
ကစားသမားခေါ်ယူမှုမှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နာပိုလီကို အနိုင်ယူလိုက်တဲ့ #အာဆင်နယ်
Sky Sports Italia ၏ ဖော်ပြချက်အရ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ လိုင်လီနောက်ခံလူ ဂါဘရီရယ်မန်ဂါဟေးစ်ကို ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ပြီးခဲသည့်တပတ်ကတည်းက လိုင်လီအသင်းဥက္ကဌ ဂျရတ်လိုပက်ဇ်က မန်ဂါဟေးစ်ဟာ လိုင်လီအသင်းမှ ထွက်ခွာဖို့သေချာနေပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဘယ်အသင်းကိုမှ မရွှေးချယ်ရသေးကြောင်း ဖွင့်ဟထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မန်ဂါဟေးစ်အတွက် လိုင်လီအသင်းမှ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို ၂၈ သန်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မန်ဂါဟေးစ်ကို အာဆင်နယ်အသင်းနှင့် အပြိုင် နာပိုလီအသင်းက ယူရို ၂၈ သန်းဖြင့် ကမ်းလှမ်းခဲ့သလို၊ နှစ်သင်းစလုံး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကမ်းလှမ်းမှုခြင်း တူညီခဲ့သော်လည်း ကစားသမား၏ ဆန္ဒအရ အာဆင်နယ်အသင်းကို ရွှေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နာပိုလီကို ငြင်းပယ်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ နာပိုလီဟာ မန်ဂါဟေးစ်ကို ကူလီဘာလီ၏ နေရာကို အစားထိုးဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပြီး အခုချိန်ထိ ကူလီဘာလီကို မရောင်းရသေးသည့်အတွက် မန်ဂါဟေးစ်အနေဖြင့် နာပိုလီမှာ နေရာရဖို့မလွယ်ကူတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီနီဂေါလက်ရွှေးစင် ကူလီဘာလီကို...
အေတီကို ကစားသမားကို ချိန်ရွယ်နေသည့် ယူနိုက်တက် နှင့် နံနက်ခင်းပိုင်း နောက်ဆုံးရ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းစုံ
ပြင်သစ်ကလပ် မောင့်ပယ်လီယာအသင်းဟာ ဆွစ်ဇာလန်ကလပ် ဘေဆယ်လ်အသင်းရဲ့ ဂိုးသမား ဂျိုးနတ်စ် အိုမလင်ကို ယူရို ၆ သန်းဖြင့် ခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းဟောင်း ဆွမ်ဆီးအသင်းဟာ ဘရစ္စတိုးစီးတီးအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ကိုရေးစမစ်ကို မဖော်ပြသောကြေးဖြင့် ၂ နှစ်စာချုပ်နှင့်အတူ ခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်လေအသင်းဟာ ဝုဗ်လ်အသင်းရဲ့ အရံဂိုးသမား ဝီနောရစ်ကို ၃ နှစ်စာချုပ်ဖြင့် ခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရှော်ကေးလ်ကွင်းလယ်လူ ဝက်စတန်မက်နေးလ်ဟာ ဟာသာဘာလင်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ပျက်ပြယ်ခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းကို လက်စတာစီးတီး၊ ဆောက်သမ်တန် နှင့် ဝုဗ်လ်တို့က အပြိုင်ကမ်းလှမ်းဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ အဲဗာတန်နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီဟာ သူ့ရဲ့ တပည့်ဟောင်း နာပိုလီကွင်းလယ်လူ အယ်လန်ကို ပေါင်သန်း ၄၀ ဖြင့် ခေါ်ယူဖို့ တော်တော်လေး နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အေတီကိုမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဆောနီဂွတ်စ်ကို ပေါင်သန်း ၇၀ ဖြင့် ကမ်းလှမ်းဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။...
Categories Short News	Comments: 0
လေဗာကူဆင်အသင်း၏ CEO ဖာနန်ဒို ကာရိုမှ အသင်းရဲ့ ကြယ်ပွင့်ကစားသမား ကိုင်းဟာဗက်စ်ဟာ လေဗာကူဆင်မှ ထွက်ခွာခွင့်ကို တောင်းခံခဲ့ကြောင်း နှင့် ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ သိပ်မသေချာကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ကိုင်းဟာဗက်စ်ဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ အလိုရှိဆုံး ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အပြင် ပေါင်သန်း ၇၀ ဝန်းကျင်ဖြင့် ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေဗာကူဆင်အသင်းဟာ ဟာဗက်ဇ်အတွက် အနည်းဆုံး ပေါင်သန်း ၉၀ အထက်ရရှိမှသာ ရောင်းချဖို့ သတ်မှတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့် စတမ်းဖို့ဘရစ်ချ်သို့ ဟာဗက်ဇ်ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဟာ ပျက်သွားဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။ ကာရိုမှ ဂျာမန်သတင်းစာတစ်ခုနှင့် တွေ့ဆုံခန်းတစ်ခုမှာတော့ “အရင်ကတည်းက ကျွန်တော် ပြောထားပြီးသားလေ၊ ယူရိုပါလိဂ်ပြီးဆုံးတာနဲ့ ဟာဗက်ဇ်ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကို စကားပြောမယ်ဆိုတာ။ ကိုင်း(ဟာဗက်စ်)ကတော့ နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ဆင့်ကို လှမ်းဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ သူရဲ့ ဆန္ဒက လာမဲ့အနာဂတ်မှာ အလုပ်ဖြစ်မယ်၊ မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို...
ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲများ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါက နာပိုလီနောက်ခံလူ ကူလီဘာလီ ကို ပေါင် ၇၂ သန်းအထိ တိုးမြှင့်ကာ ကမ်းလှမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြထားပါတယ်။ မန်စီးတီးဟာ နောက်တန်းအင်အားကို မဖြစ်မနေဖြည့်တင်းဖို့ လိုအပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့် ကူလီဘာလီ သည်းသည်းသန်သန်ချိတ်ဆက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီနာမည်ကြီး ဂျာနယ်လီ အဲဖရက်ဒို ပီဒယ်လ မှ စီးတီးဟာ နွေရာသီ ဈေးကွက်အဖွင့်မှာပင် ကူလီဘာလီကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၅၈ သန်းဖြင့် စတင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း ပယ်ချခံခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ပီဒယ်လ က စီးတီးနည်းပြ ဂွာဒီယိုလာဟာ ကူလီဘာလီကို ပေါင် ၇၂ သန်းအထိ တိုးပေးကာ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ကမ်းလှမ်းသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာ ယနေ့ညမှာ လိုင်ယွန်အသင်းနှင့် ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်ကို ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါက...